Somaliland: Xildhibaanno Isugu Muruxsaday Weerarka Iyo Difaaca Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xildhibaanno Isugu Muruxsaday Weerarka Iyo Difaaca Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland
Somaliland: Xildhibaanno Isugu Muruxsaday Weerarka Iyo Difaaca Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland
Xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi, ayaa eedaymo u jeediyey Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon) iyo Wefti uu hoggaaminayey oo dhawaan Safar shaqo ku tegay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaas oo uu ku tilmaamay Masuuliyiin ku fashilmay hoggaaminta laga filayey, isla markaana kala qaybin iyo kala kaxayn ka dhex wada Bulshada iyo Beelaha Sool.
Hase-yeeshee, Xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo Xubnaha Weftigaas Wasiirka ka tirsanaa, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha Mudane Siciid. Waxaanu sheegay in Xildhibaan Siciid oo ay labadooda iyo Wasiirka arrimaha guduhuba ay ka soo wada jeedaan gobolka Sool dhalasho ahaan, isla markaana aanu 11 sano oo uu Siciid Maxamed Cilmi Golaha Wakiillada ee Somaliland ay Xildhibaanno ka wada ahaayeen aanu maalin keliya booqan ama Safar ku tegin deegaannada gobolka Sool iyo magaalado-madaxdiisa Laascaanood toona.
Xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo Shir Jaraa’id ku qabtay shalay, ayaa arrimahaas ka hadlay, waxaanu yidhi; “Wefti Wasiirro waawayn oo Wasiirradii degaanka ahi hoggaaminayaan oo Niman Xildhibaanno ah oo meesha ku noqnoqon jiray ay la socdaan, ayaa tegay Sool. Weftigaas oo uu hoggaaminayey Wasiirka arrimaha gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), gobolka waxa uu ka abuuray tafaraaruq iyo in qaab Qabiil loo kala fadh-fadhiisto. Xad wuxuu gaadhay markii Dadweynihii degaanka Odayaashoodi ay diideen inay la kulmaan oo ay arrimaha qaarkood kala hadlaan wuxuu gaadhay in Koofiyado loo soo xidho Saraakiishii Xukuumadda ee joogtay Wasaaradaha iyo Hay’adaha gobolka oo Odayaal laga dhigo.”
“Baaqa hadda la leeyahay Baaq baa la soo saaray, Baaq ay Dadka degaanka iyo Odayaashu qayb ka yihiin maaha, ee waa Baaq ay isla saxeexdeen Weftigaa Wasiirrada iyo Saraakiishii Hay’adaha dawladda u joogtay gobolka. Sidaa daraaddeed, Aniga oo ka mid ah Xisbiga Kulmiye, Aniga oo ka mid ah Xubnaha Golaha Wakiillada ee taageersan Xukuumadda, Madaxweynaha waxaan ka codsanayaa arrintaa gobolka in dib loogu noqdo. Odayaasha Wasiirrada ah iyo Ragga kale ee meesha tegayna waxaan leeyahay waar Dadkiinna u tudha.” Sidaa ayuu yidhi Xildhibaan Siciid oo tilmaamay inay masuuliyad-darrada uu tilmaamay inay halkaas ka dhacday ay leeyihiin Wasiirrada arrimaha gudaha iyo Khayraadka Biyaha oo labadooduba ka soo jeeda Sool.
Geesta kale, Xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Wakiillada, sidoo kalena ka mid ahaa Xubnaha Weftiga Wasiir Faratoon hoggaaminayey ee Shaqaaqo ka dhacday Koonfurta gobolka Sool dhawaan halkaas u tegay, ayaa isla shalay isna Shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa, waxaanu ka jawaabay eedaynta Weftiga uu ka midka ahaa Xildhibaan Siciid u jeediyey, waxaanu yidhi; “Hawshii aannu halkaas u tagnay boqolkiiba boqol siday ahayd baannu ugu guulaysannay, Cid kasta iyo Qof kasta oo aannu la kulannayna fikirkii aannu is-dhaafsannay wuxuu u muuqday fikir sax ah oo u baahan in la dhiirrigeliyo. Odayaashii deegaanka, Siyaasiyiintii, Maamulkii iyo nooc kasta oo aannu saddexdaa Maalmood ee aannu meesha joognay la kulannay arrimihii aannu u tegnay si gobannimo, anshax iyo karaamo leh ayaannu u wada qaadannay oo isula meel-dhignay.”
“Waxaad ka garanaysaan Baaqa ka soo baxay Shirka Annagu kumaannaan saxeexnayn ee Cuqaasha degaanka ayaa ku wada saxeexnaa. Cuqaashaa yaa codkooda ku hadlayey? Odayaashaa ku hadlay, Nin Karmeedkaa ku hadlayey. Xildhibaan Siciid Nin la yidhaahdo oo aannu isku deegaan ka soo jeedno, ayaa yidhi; ‘Lalama Shirin Cuqaal’. Siciid waxaan leeyahay; Waa runtiisa! Cuqaasha, Cid Cuqaal ah iyo Cid aan Cuqaal ahayn maba kala yaqaanno! Sababta oo ah 11-kaa sannadood ee aannu Xildhibaannada wada ahayn ama ka badan weligii Laascaanood isma taagin, Adhi-caddeeye ayuu ku dhashay oo isma taagin. Markaa, waa sax tiisu oo in Caaqil jiro iyo Caaqil Hebel midna wejigiisa ma garan karo.” Sidaa ayuu yidhi Xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore.
Xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore
Wargane Tv: Magacyada Sideed Xubnood Oo Ahaa Masuuliyiinta sare ee Xisbiga WADDANI Ee Gobolka Hawd Oo Iska Casiley